Athlọ ịsa ahụ na-asa ahụ Nickel gbasaa
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW 8 Inch Ebe Nsa a Na-asa Ahụ Na-asa Nickel
WOWOW 8 chlọ Wlọ Wlọ chlọ Mgbasa Ozi N'ịkpọ Ebe Obi Igwe Nickel
gosiri 4.95 nke 5 dabeere na 20 ahịa Fim
abụọ na-ejide ọmalịcha ụlọ ịsa ahụ nwere ike igbo mkpa nke iche na mmiri ọkụ oyi na-atụgharị, kwalite mma ụlọ ịsa ahụ, ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka gị!
Ntụziaka nwụnye 2320300
Lọ ịsa ahụ batrị mebiri emebi nickel 2320300
You maara na ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ gị bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ gbasara usoro imepụta? Ọbụna ha dị obere, ọkpọkọ nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ịchọ mma ụlọ ịsa ahụ gị. Athlọ ịsa ahụ na-asa ahụ bụ ebe dị mma na ime ụlọ ịsa ahụ ọ bụla. Nke ahụ pụtara na mgbe mmadụ banyere ime ụlọ ịwụ, otu n’ime ihe ndị mbụ ọ dọtara uche ya, bụ ọkpọkọ ime ụlọ ịwụ. Ya mere, ụlọ mposi nwere ike ịme mmetụta dị egwu na ụdị ụlọ ịsa ahụ ọ bụla ma họrọ nke amamihe.
Nke a gosiri na ị ga-ahọrọ pọpụl ịsa ahụ nke ọma. Nwere ike ịnwe ego (mkpuchi) maka ụlọ ịsa ahụ ọhụrụ gị. Ọtụtụ mgbe anyị na-ahụ na ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ adịghị esonye na nhazi mbụ na mmefu ego. A na-ahọrọ ihe eji asa ahụ ebe a na - asa ahụ naanị na ngwụcha nke usoro a, ebe a na - etinye ụlọ ịsa ahụ ugbu a. O nwere ike isiri gi ike ichota uzo eji asa aru nke na-adabaghi ​​na ihe ichoro. Budgetlọ ịsa ahụ na-emefu ego na-ejedebe na njedebe n'ihi ihe ndị a na-atụghị anya ya, ị chọghị imebi iwu na ịhọpụta ụlọ ịsa ahụ gị. Karịsịa mgbe ị maara na ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ a nwere ike inwe mmetụta dị egwu na ịchọ mma ụlọ ịsa ahụ gị dum. Ya mere, ọ dị mma ịmara na WOWOW na-enye gị ọmarịcha mara mma ụlọ ịsa ahụ pọmpụ na ọnụ ahịa ọnụ. N'ihi ya, WOWOW na-enye gị uru kachasị mma maka ego.
Ngwunye ụlọ ịsa ahụ siri ike gbachapụrụ agbachasị ikuku nickel
WOWOW ụlọ ịsa ahụ na-agba mmiri nickel zuru ebe niile bụ nke igwe siri ike. Ga-achọpụta ya ozugbo mgbe ị na-ejide mmiri ịsa ahụ na aka gị. Ime ụlọ ịsa ahụ na-ekpochasị nickel zuru oke 3.8 lbs nke na-ekpughe ogo ya na-enweghị obi abụọ. Nwere ike ijide n'aka na ọkpọka ụlọ ịsa ahụ kacha mma nke ga-adịgide ruo ọtụtụ, ọtụtụ afọ. O doro anya na ihe ọla kọpa siri ike dị mma karịa ọla ndị ọzọ. Na ndị a ụdị oke metal ọdịnaya ị na-adịghị na-echegbu onwe na ihe nile banyere corrosion nsogbu ihe atụ. E wezụga nke ahụ, ihe ndị dị elu na-enye nkwụsi ike na oke ndụ ndụ. Njirimara mmiri gị ga - abụ n'efu ma yabụ nhọrọ kachasị mma maka ahụike gị.
E wezụga nke ahụ, ụlọ ịsa ahụ na-asa ahịhịa nickel zuru ezu ejirila elu nickel kpochapụrụ. Ọ bụghị naanị na ngwụcha a na-enye mmetụ mara mma na ime ụlọ ịsa ahụ gị, ọ na-eyi na-eguzogide ọgwụ. Na leghaara nickel imecha egbochi mmiri na ọkọ, nke na-eme ka ime ụlọ ịwụ ahụ foset leghaara nickel ebe nile ọkọ- na Unyi? Free. Ya mere, ọ bụ okomoko dị ọnụ ala na ime ụlọ ịwụ gị, nke ahụ dị mfe ihicha site na ihichapụ ya na akwa. Dị mfe dị ka nke ahụ!
Mmiri mmanụ ụlọ ịwụ ahụ ejiri nke a rụrụ n'ọkụ mee nke ọma
Uclọ ịsa ahụ WOWOW nke ikuku ịsa ahụ na-agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba nke abụọ na-ahụ maka mkpa gị idozi olu nke mmiri ọkụ na mmiri oyi iche. Igwe a na-agbasa ebe niile dịkwa agbanwe agbanwe site na nha anọ ruo 4 n’ogologo. Ugba mmiri a chọrọ oghere nwere oghere 16 na oghere ịwụnye nwere ike idozi ya na mmasị gị.
Ulo elu ulo ahiri ahihia doro anya bu ihe puru iche nke ị gaghi ahu otutu otutu ulo mposi nke ighota ahia. Ọtụtụ ụlọ ịsa ahụ na ụlọ ịsa ahụ yiri nnọọ. Findchọta ihe pụrụ iche gbasara akwa mmiri nwere ike ịbụ nnukwu ihe ịma aka. E wezụga ya obi ike imewe, elu spout nke ime ụlọ ịwụ faịlị brushed nickel zuru ebe nile na-enye gị zuru ezu n'okpuru n'okpuru spout inye kacha nkasi obi. Ya mere, ụlọ ịsa ahụ a na-eji ejiji dị okirikiri nwere akụkụ abụọ na-enye gị njiri mara ọhụụ na nkasi obi n'otu oge. Ruo n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, ị gaghị agbatị aka gị iru iji rute mmiri. Nke ahụ na-eme ka arụ ọrụ dị mma.
Ngwaọrụ ịsa ahụ na-arụ ọrụ na-agba agba mmanụ ikuku na-agba agba nke ọma
Aka abụọ a nke mmiri ịsa ahụ dabara adaba na-enye gị ohere iji chịkwaa olu gị na mmiri ọ bụla. A na-eji aka ọla abụọ a mee ọla edo siri ike ma na-enye njigide dị mfe ma bụrụ nke a haziri nke ọma. Ọ bụghị naanị ime ụlọ ịwụ ahụ batrị ọla nchara na-achịkwa nwere ike ịhazi ya nke ọma, yana spout onwe ya na-enye ogo 2 ruru. Yabụ ị nwere ike idobe mmachi ụlọ ịsa ahụ na-acha uhie uhie n'ụzọ ga-adịrị gị mma, ị nwekwara ike ịgbanye ya na azụ. Nke a na - eme ka ọ dịrị gị mfe ihicha ebe ịsa ahụ ịsaatụ dịka ọmụmaatụ.
E wezụga ọrụ ya dị mfe, a ga-enwe ike ịwụnye akwa mmiri ụlọ ịsa ahụ gbachapụrụ agbachapụ. Ihe omuma ya wụnye ngwa ngwa bu ihe puru iche n’ahịa. Nke a na - eme ka ị nwee ike itinye njikọ niile n'enweghị nsogbu na aka gị. A na-agwakọta ahịrị mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri site na ọkpọkọ ngwa ngwa ịwụnye ngwa ngwa nke enwere ike itinye ya na enweghị eriri. Site na usoro a ziri ezi, ị jikwa n’aka na ọkpọkọ mmiri gị agaghị agbaze. Ime ụlọ ịsa ahụ na-acha ọcha na-agba agba ụlọ ikuku dị mma ịwụnye na-ejighị plumber dị oke ọnụ.
Akwụkwọ ikike ndozi ụlọ ịwụ ahụ na-acha mmanụ ikuku na-agba aja aja
Bathroomlọ ịsa ahụ na-asa ahụ nickel zuru ebe nile na-abịa na ihe niile dị mkpa, gụnyere ntinye ngwa. E wezụga akwa square spout na 2 ejiri ya, ngwugwu na-abịa na mmiri mmiri, 2 mmiri ọkpọkọ nke 50 cm maka oyi na mmiri ọkụ, 1 gbapụta nje stopa na a zuru set nke ngwa na ngwaọrụ.
Dị ka WOWOW na-ekwe nkwa na ọ na-enye uru kachasị mma maka ego, ụlọ ịsa ahụ na-asa nickel zuru ebe nile na-abịa site na ekele nke ụbọchị 90 na-akwụghachi ụgwọ. Ọ bụrụ n ’ọ gaghị eju gị anya maka uru ego ị ga - enweta, ị nwere ike ịlaghachi pọmpụ ụlọ ịsa ahụ batrị nickel zuru ebe niile n’enweghị nsogbu. Na-ekwe nkwa nke a zuru ezu nkwụghachi enweghị ajụjụ ọ bụla jụrụ. E wezụga nke ahụ, WOWOW na-enye gị oge ikike ikike afọ 3. Ọ bụrụ na ọkpọka ụlọ ịsa ahụ na-ekpocha nickel zuru oke agaghị arụ ọrụ dịka ị ga-atụ anya ka ọ rụọ, WOWOW ga-eji ihe ọhụrụ dochie eriri mmiri ịsa ahụ. WOW na-eji ọrụ ya akpọrọ ihe ma anyị agaghị ahapụ gị.
Uru nke ụlọ ịsa ahụ ịsa ahụ na-a bụ ikuku nickel juputara na a nutshell:
• Na-enye ụlọ ịsa ahụ mara mma
• ihe osise pụrụ iche 7
• ịchachasị nickel n'ụcha
• Ihe ndị dị na ọla
• Ntachi obi na ndụ gị niile
• Ọ dị mfe ihicha ma dị mfe ilekọta
• akwụkwọ ikike afọ 3
SKU: 2320300 Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: 2 Aka, Nickel azọrọ
11.2 x 10.1 x 3.2 sentimita
Brass / Igwe anaghị agba nchara / Zinc Alloy
Mmiri na-ekpo ọkụ / oyi
Nnukwu uru maka ọnụahịa ahụ. Fraction nke ego. Ọ dị mma. Action na ịlesụ bụ ezigbo onye na uko. Rịba ama na spout enweghị ike ịgba. Achọghị m nchọpụta nke ọma na ọ bụghị nsogbu, mana ndị m dochiri nwere atụmatụ ahụ.
Super dị mfe iji wụnye. Kpachara anya mgbe ị na-etinye eriri ọkọnọ iji mee ka ọdịda tụlee. Jiri mkpịsị aka abụọ iji mee ka ha sie ike. Ndị ọzọ karịa nke ahụ, ọkpọkọ ọkpọ mara mma. Ọ dị mma ịzụrụ!
Anọ m na nlezianya na-emefu ego ma mechaa họrọ nke a maka pọmpụ nke ụlọ ịsa ahụ. Enwere m mmasị n'ịdị elu na nfe dị mfe, arụnyere ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa ugbu a ma ọ na-arụ ọrụ zuru oke. Aga m akwado ya!
anyị na-emezigharị ụlọ mgbazinye iji tinye n'ahịa iji ree n'ọnwa na-abịa. Anyị zụtara ihe ịsa ahụ na nnukwu ụlọ ịsa ahụ na nnukwu ụlọ ahịa dị na mpaghara mana ọkpọkọ ndị ahụ dị oke oke. Achọpụtara m ha na WOWOW ma kpebie nke a. Great achọ foset karịsịa maka price. Dị mfe iji wụnye ma tinye akụkụ niile anyị chọrọ.
Nke a bụ foset kachasị mma maka ọnụahịa ahụ! Ọ bụ ọla niile nwere sọsọ na-awụ na-awụlikwa mmiri nwere ite e ji akụ azụ! Enweghị ntutu nhicha anwụrụ nke ntutu!
Otu n’ime ihe kachasị mma ị zụrụ nke mere ka ọ dị elu n’ime ụlọ ịsa ahụ m. Mbupu ngwa ngwa..mfe nfe. Otu ụdị dị ka ị ga-akwụ okpukpu abụọ na Depot Home. Nweta uru niile maka ego gị. Oké obi ụtọ na m zụrụ.
Obi dị m ụtọ na achọgharịrị m n'ịntanetị iji chọta ọkpọ mmiri a. Ọ bụ na a ụzọ ala na-eri karịa ndị ị na-ahụ na nnukwu igbe ngwaike hardware, na anyị adịghị achụ ihe ọ bụla dị ka anya. Ọ mara mma. Ga-azụrụ ọzọ site na ika a.
N'ezie mfe echichi na ezigbo mma na ịke. Tụlee na pọmpụ ndị ọzọ m nwetara site na Home Depot, nke a kwesịrị ịzụrụ oke mma mana Ọkara ọnụ. Akwadoro ndị enyi m
Hụ fụlawa. Nwụnye dị mfe ọ gwụla ma anyị ga-enweta ogologo hoses maka mmiri anyị akọwapụtara. Ọ na-ele anya ma nwee mmetụta opekata mpe okpukpu abụọ a kwụrụ. Haziri ọfụma mapụtara mma nke bụ obere nkọwa mana mere ka ihe niile dị mma. Daalụ!
Dị mfe itinye ya. Na ọbụna nwere uwe ugbua na igbe. Ọ na-ewe m otu elekere wepụ nke ochie :(. Ma 15mins tinye nke ọhụrụ, btw Adịghị m pịịlị. Ọfụma ma ọ bụ oyi ha kara akara nke ọma.
E ji ihe fụchie nke bụ́ ọkpọka na ihe e kere eke wee fụchie nke ọma iji gbochie ọkọ. E ji ọla kọpa mee ụrọ ahụ na eriri ya. Otú ọ dị, eweghachiri m otu a maka otu nnukwu ntụpọ. Ọgba mmiri ahụ dị ukwuu ma buru oke ibu maka oghere oghere dịtụ larịị. Ejiri plastik dị fechaa mee ọsịsa ahụ, ọ bụghị igwe.
Mgbe nwoke m lere akụkụ ndị a anya na nke mbụ ya, iwe were ya na ị andụ iyi. Mana oge o mechara wụnye pọmpụ ahụ, o tolarị onye toro ọkpọ ahụ ma jụọ ihe kpatara akụrụngwa ime ụlọ ịwụ niile adịghị mma. Obi dị m ụtọ na m họọrọ ọkpọkọ mmiri a. Na mgbakwunye na ịdị mfe, echere m na ọ mara mma. Nke a bụ ụdị m na-achọ.
Anyị zụtara ngwaahịa a ka ọ bụrụ ihe nnọchi anya maka sistemụ ọkpọkọ mmiri ochie anyị, ngwaahịa a emezuola atụmanya niile na karịa! Anyị chọrọ ihe anya mara, ma dabara n'ime ụlọ anyị decorations / isiokwu. Ọ bụghị naanị na ọkpọkọ mmiri a dị mma, ọ na-arụ ọrụ dị ezigbo mma ma nwee mmiri dị ịtụnanya. Emere m usoro a n'ime ihe dịka 20 mins na-enweghị enyemaka onye ọ bụla. Aga m akwado ngwaahịa a nye onye ọ bụla n'ahịa maka ọkpọkọ mmiri nke oge a nke anaghị etinye oghere n'ime obere akpa ha.
eji m ngalaba a dochie nnukwu akụrụngwa a na-akpọ hans grohe (mkpope). arụnyere na 15 nkeji. super ezigbo, dị mma valvụ edinam. imewe bụ magburu onwe iji gbochie handle ije wdg na konkiri countertop. nnukwu uru. ọzọ foset m dochie bụ 5x ego nke a. m bụ onye na-ewu ụlọ, ma tinye 100 faucets. nwee obi ụtọ!
Ime ụlọ ịwụ ahụ. Agba na ụdị dị mma mana ọkpọkọ mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ siri ike iji gbanye ngwa ngwa ma na-eme mkpọtụ. Igwe mmiri na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma. Akụkụ ahụ niile dị na igbe ahụ, ma ha abụọ nwere akwa kwesịrị ekwesị ma tinye ya nke ọma. A na-emechi ihe nkedo maka ihe ọ bụla mmiri ọkụ na mmiri oyi ka ọ ghara idozi ya. Ọ bụ nrụpụta nrụpụta. Ma ọ bụghị ya, mmiri oyi na-arụ ọrụ nke ọma, mana mgbe ị gbanwere njikwa mmiri ọkụ ọ na-esi ike ma na-eme mkpọtụ wee nye ohere ka mmiri ọkụ ahụ si na pọmpụ ahụ pụta.
Lee ụdị ọ happyụ nke ọkpọkọ mmiri a egosipụtawo n’efu m! Mkpọkọta nke ọma, mma ka zuru nzukọ gụnyere, na-natara a kenha ncha dispenser na ihicha akwa. A na-enye ngwá ọrụ iji setịpụ ihe mkpuchi isi maka aka, yana, ọ dị mma ịnwe ihe mkpuchi ahụ mgbe ị na-ehicha mkpocha (enweghị ezé ezé). Nnukwu ọnụahịa kwa! Ezigbo mere! Aga m alaghachi azụ maka ịzụta n'ọdịnihu!
ihe ahụ dị ezigbo mma. Naanị nsogbu bụ na emeghị ka otu pọmpụ ahụ dị mma ma gwerie oge ọ bụla ị gbanyere ya ma ọ bụ gbanyụọ ya. Ekwesịrị m ime mgbanwe ụfọdụ iji dozie nsogbu ahụ. Ọzọkwa pop up drain anaghị agbapụta iji mee ka mmiri gbapụ ọsọ ọsọ.
Mara mma nke ukwuu na-achọ foset na o yiri ka ọ bụ ezigbo mma. Ọ masịrị anyị nke ukwuu nke na anyị nyere iwu maka 2 maka ụlọ ịsa ahụ nna anyị ukwu.
Obi dị anyị ụtọ na anya na ọsọ anyị natara nke a. Echichi siri ike ntakịrị mana n'ogozi, ọ bụ ọnụ ahịa dị mma ma dịkwa mma maka mmegharị ụlọ ịsa ahụ anyị.
M *** n2020-06-12
Akwa ngwaahịa! Super dị mfe iji wụnye na ụdị na-eso ndị ọbịa anyị saa ahụ zuru oke. Ọ bụ ihe mara mma karịa ihe ọ bụla anyị hụrụ na obodo ngwaike na-echekwa na price bụ kemmenyeujo!